Iglasi ezaliswe ngokuchongwa kweruby, iRuby ezalisiweyo. Ixabiso ngecarat - ividiyo
tags igcwalisiwe, Iglasi igcwele, ilitye elinqabileyo elibomvu
Ukuzalisa ukuqhekeka okanye ukugqabhuka ngaphakathi kwerubhi ngeglasi ekhokelayo okanye izinto ezifanayo ngokuphucula ngakumbi ukubonakala kwelitye, kusenza iirubhi ebezingalunganga ngaphambili ukuba zilungele ukusetyenziswa kwezacholo. Ukuchongwa kweglasi yeruby kulula kwaye ixabiso layo lifikeleleka ngakumbi kuneerubhi enganyangekiyo.
Iglasi ekhokelayo igcwalise iruby
Amatye arhabaxa aconjululwe kwangaphambili ukuphelisa konke ukungcola komhlaba okunokuchaphazela inkqubo
Ilitye elirhabaxa licocwa ngehydrogen fluoride
Inkqubo yokuqala yokufudumeza kungafakwanga kugcwaliswa. Inkqubo yokufudumeza iphelisa ukungcola ngaphakathi kwiziqhekeza. Nangona oku kunokwenziwa kumaqondo obushushu ukuya kuthi ga kwi-1400 ° C (2500 ° F) kunokwenzeka kakhulu kubushushu obujikeleze i-900 ° C (1600 ° F) kuba isilika ye-rutile isekhona.
Inkqubo yesibini yokufudumeza kwi-oveni yombane eneezongezo zeekhemikhali ezahlukeneyo. Izisombululo ezahlukileyo kunye nemixube ibonakalisile ukuba iyaphumelela, nangona kunjalo uninzi lweglasi-umgubo osetyenzisiweyo ngoku. Irubhi ifakwe kwioyile, emva koko igutyungelwe ngomgubo, ibethelelwe kwithayile kwaye ibekwe eontini apho itshiswa khona malunga ne-900 ° C (1600 ° F) ngeyure enye kwindawo eneoksijini. Umgubo o-orenji onombala uguqula ukufudumeza ubonakale ubencame umbala omthubi, ogcwalisa konke ukwaphuka. Emva kokupholisa umbala we-paste ucace gca kwaye uphucula ngokumangalisayo ukubonakala kweeruby.
Ukuba umbala ufuna ukongezwa, umgubo weglasi "unokuphuculwa" ngobhedu okanye ezinye izinto zesinyithi kunye nezinto ezinje ngesodium, calcium, potassium njl.
Inkqubo yesibini yokufudumeza inokuphindaphindwa kathathu ukuya kwesine, nditsho nokufaka imixube eyahlukeneyo. Xa ubucwebe obuqukethe iirubhi bushushu ukuze kulungiswe. Akufanele ifakwe i-boracic acid okanye nayiphi na into, njengoko oku kungabonakalisa umphezulu. Akunyanzelekanga ukuba ikhuselwe njengedayimani.
Iglasi ezaliswe ukuchongwa kweruby
Unyango lunokuchongwa ngokubona iibhulabhu kwimingxunya kunye nokwaphuka kusetyenziswa i-10 × loupe.
Ndingazi njani ukuba i-ruby igcwele iglasi?
Olona phawu lubonakalayo lubonakalayo lweruby edityanisiweyo ngamabhamu egesi angaphakathi. Ezi zinokuba ngamanqanaba ngamanqanaba omnye okanye amafu amaqamza, acabalele okanye ajikeleze, kwaye akhoyo kuzo zonke iirubhi ezigcweleyo. Ngamaxesha amaninzi, ziyabonakala nakwiliso elingelilo.
Ngaba iglasi igcwele iruby yendalo?
Ewe lilitye elinyangiweyo. Yenziwe kusetyenziswa ubushushu kunye nento ukuzisa umbala obomvu obomvu njenge-ruby yendalo, iirubhi ezikhokelela ngeglasi ezizalisiweyo ziyanyangwa ukuzalisa iintanda ezikhoyo elityeni. Obu buncwane bunokulingisa iruby, kodwa azingqinelani namandla kunye nokomelela okwenziwe ngamatye okwenene.
Ngaba iglasi igcwele ngeerubhi?
Ixabiso leerubhi eligcwele iglasi libiza kakhulu kuneruby enganyangekiyo. Ukusebenza konyango kuyamangalisa, kuba kuguqula i-corundum engacacanga kwaye iphantse ingenamsebenzi kwizinto ezibonakalayo ngokucacileyo ukuba zisetyenziswe kwizinto zokugqoka. Ewe amatye anokubonakala enomdla kakhulu kumthengi ongafundiswanga. Inokuba ngamaxabiso alishumi ukuya kumawakawaka atshiphu kunelitye elinye elingakhange linyangwe.
Senza ubucwebe ngokwesiko nge-fyure ezaliswe irubhi njengeringi, amacici, isongo, isacholo somqala okanye isangqa.
I-ruby yenkwenkwezi ye-Synthetic
tags ilitye elinqabileyo elibomvu, Nkwenkwezi, zokwenziwa
tags Anyolite, ilitye elinqabileyo elibomvu, Zoisite